नेपाल टेलिकमले सुरु गर्यो भिओलएलटिई सेवाको परीक्षण, कसरी प्रयोग गर्ने ? « Mero LifeStyle
नेपाल टेलिकमले सुरु गर्यो भिओलएलटिई सेवाको परीक्षण, कसरी प्रयोग गर्ने ?
मेरो लाइफस्टाइल	|| 17 May, 2021
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले भ्वाइस ओभर (भिओ) एलटिई सेवाको परीक्षण सुरु गरेको छ । टेलिकमका सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने भन्दै आजदेखि वायरलेस प्रविधिको चौथो पुस्ताको फोरजीमा एलटिई सेवाको परीक्षण सुरु गरिएको हो ।
उक्त सेवा प्रिपेड तथा पोस्टपेड फोरजी मोबाइलमा भिओ एलटिई सेवाको परीक्षण गर्न लागिएको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले जानकारी दिए ।
भिओएलटिई सेवाका प्रयोगकर्ताले नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा २८ दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने एक सय मिनेट भ्वाइस सुविधा एकपटकका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । आफ्नो मोबाइल सेटले भिओएलटिई सपोर्ट गर्छ-गर्दैन भन्ने थाहा पाउनका तथा उक्त सेवासम्बन्धी थप जानकारीका लागि टेलिकमको वेबसाइटमा लिङ्क प्रयोग गर्न सकिनेछ ।